Harvey si Microgaming oghere | Blog Penguin - pisklak.net
Harvey si Microgaming oghere | Blog Penguin
Oghere Harvey nke Microgaming bụ ụlọ oriri na ọcaụ restaurantụ nke ụlọ oriri na ọ onlineụ onlineụ na-ekwu okwu n’ịntanetị nke na-ejuputa obere akpa gị ma jupụta afọ gị na nri na-atọ ụtọ na nke ọma. Nwee ụtọ nri nri Executive a ka ị mejupụtara akpa gị.
Kpalie agụụ gị n’ihi na a na-eji champeenu mee mmemme Harvey nke ga-ejupụta gị na mkpụrụ ego na ọtụtụ ndị na-eme ọghọm. The fun na-akpali akpali spins na Microgaming Ohere mepere Auto Deposit Video Ohere mepere ga-ị spinning na osisi na nri na nnukwu champeenu.
Egwuregwu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-eji agwa Harvey na-eje ozi oporo, ejula, ofe, na blọgụ cheeseberry dị ka akara akara champeenu dị njikere ịsa ahụ na ịsa ahụ na ihuenyo gị na bọmbụ ego na-enweghị atụ.
Oghere Harvey nwere ọtụtụ ụdị nri dị iche iche na-enyocha na ihuenyo ahụ, yana ọnụọgụ nọmba kaadị ndị na-atụgharị na ihuenyo gị ka ị na-efopụ mkpụrụ ego na nnukwu champeenu.
Ihe akara kaadị bu akara ntà kachasi ala. Mana ọ bụrụ na ị see foto Harvey Wilde gị, ọ ga – arụ ọrụ ma nwee ike iweta ọtụtụ ego mgbe ị risịrị nri abalị na nnukwu champeenu iji sachaa ya niile.
Pịa gị chioma na-agbalị see champeenu ịsa ahụ ụzọ na multipliers na-amụba ego gị ngwa ngwa. Ugwu a na-enweta na ntanetị na ntanetị nke nwere ike ime ka ị maa abụba na ọgaranya na RTP nke 95.97% na ọtụtụ nri na-eje ozi na efere efere dị ọcha.